बुधवार पनि महिला लघुवित्त र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि
वैशाख १५, काठमाडौं । बुधवार पनि महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । दुवै कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यी दुवै कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा खरीदकर्ता अत्याधिक भएकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो । महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ८४१ र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ४ हजार ६३६ पुगेको हो ।
महिला लघुवित्तको हकमा कम्पनीको शेयरमूल्य कारोबारमा आएको तेस्रो दिनदेखि ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आइरहेको भने विशाल बजार कम्पनीको रोकिएको शेयर कारोबार तीन महीनापछि खुलेसँगै शेयरमूल्य बढेको हो । वैशाख ९ गतेदेखि कारोबारमा आएको कम्पनीको शेयरमूल्य सोही दिनदेखि वृद्धि हुँदै आएको छ ।